TAXANAHA KASMO & KASIIS - QAYBTA 2AAD - مركز الكتاب للبحوث والدراسات
نشرت بواسطة: Abwaan Maxamuud Cali Aadam Hoorri في دراسات 18 فبراير، 2019	0 275 زيارة
Jaalle kani waa qaybtii 2aad Taxanaha kasmo &kasiis , waa dhigane taxanahe ah , waa qormo xan-baarsan ogaal dhaqan iyo oollimaad af, waxa aan ku Eegayaa kolkan Ricro ka mid ah laamaha dhaqanka ummmad soomaaliyeed , waa hagaage jaalle waxa aan wax kaaga iftiiminayaa sooyaalka xiliyada iyo kal tirsiga soomaalida , sooyaalka hab-dhaqankii xiriir ee bulsho “soomaaliyeed iyo sooyaalka gar-soorka soomaalida, soomaalidi waxa ay leedaahy hidde iyo dhaqan facweyn , kaa soo ku dhaadan dhugmo waayo Arag , Garasho Ximrane, xag-dhowr Xukmane iyo diin dhowr xamlane.
Taxanaha Kasmo iyo Kasiis waa raad-raac lagu sahminayo kaalinta Aqoomeed iyo inta ay dhallaanku u jiraan Barasha dhaqanka iyo dhigaalka far-soomaalida, Taxanahani waxa uu Noqon doonaa mid joogto ah buuxiyana baahida Ardayga soomaaliyeed iyo qofkasta oo illaashka u adkaystay Deraasadda Tariirkhda iyo dhaqanka soomaaliyeed.
Maansada Kasmo waxa ay soo baxday hilaaddi 21-8-2015, inigoo jooga magaalada Garoowe waxa aan ku baafinayaa maansadan Qiimaha dhaqanka iyo qofka looga baahan-yahay Ruuxuu noqonaya! Maansadani waa Astaan gobeed xan-baarsan dhaqan, dhigaal, sooyaal, hidde, Taariikh iyo dhaqan suubban iyo dhaxal sooyaal waxa ayna tidhi saatan
Gabaygaba nimaan baran
Giiskuna u gabay yahay
Af- gobaadsi Laga Tiray
Gacan Saar ha’joogee
Gego dhaanto nimaan Tegin
Gedda shiribka garanayn
Seddex gooyo tumikarin
Gelbis aan ka luuqayn
Gabbal ay aroostahay
Walle “Geelo” kuma dheho!
Gurdan raaca fiidkiyo
Habeen gaafna uu jiro
Barbaartuna is guratee
Ninaam jaanta goynkarin
Iyo garasho xeel dheer
Gacan Saar hajoogee
Walle “Golaha” lamatago!
KASIIS KASMO qaybta 2aad	2019-02-18
الوسوم :KASIIS KASMO qaybta 2aad
السابق: Tayada Waxbarashadeennu waa halka Tacliinteenna laga soo galay
التالي: SIYAASIGA MAANTA